I-China Zonke Ngenye yeeNkcukacha zeZitrato zeSolar, iiLow Light Lot, 30W Solar Street Light Manufacturer
Inkcazo:Konke Ekubeni KuKhanya kweSitrato esisodwa ,Iimpawu zokuLawulwa kwelanga,30W Ukukhanya kweSitet Street Solar,Iposti yeSampula seLatrato yeSola,,
Home > Imveliso > Ukukhanya kweSitet Street > 30w Ukukhanya kweSitet Street
Iintlobo zeMveliso ze- 30w Ukukhanya kweSitet Street , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Konke Ekubeni KuKhanya kweSitrato esisodwa , Iimpawu zokuLawulwa kwelanga ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
20w 30w I-Solar Street Light Pole Light 3600lm  Qhagamshelana Ngoku
30W Design Design Lamp Light Sole Street  Qhagamshelana Ngoku
30W I-Solar Street Pole Design IP65  Qhagamshelana Ngoku
30W I-Solar Power Street I-Pole Fixture  Qhagamshelana Ngoku
30W Ukukhanya kwe-Solar Powered Led Pole Light 5000K  Qhagamshelana Ngoku
40W I-Solar Street Pole Light 5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-30W I-Street Led Street Ukukhanya Kuzo zonke  Qhagamshelana Ngoku
30W I-Outdoor Solar Path Street Pole Lights  Qhagamshelana Ngoku
30W Amanqampu ekukhanyisa izitrato ze-StreetWes  Qhagamshelana Ngoku
30W I-Outdoor Wall I-Mount Solar Lights  Qhagamshelana Ngoku
30W Ukukhanyisa kwelanga ukulungiselela indawo yokupaka  Qhagamshelana Ngoku
30W I-Solar Energy Pole Mount Led Street Light  Qhagamshelana Ngoku
30 Watt Solar Power Street Pole Light 5000K  Qhagamshelana Ngoku
I- Solar Light Extension Pole sisisombululo esihle kwiimfuno zokukhanyisa ukukhuseleka. Leli xabiso elingu-30w le-Solar Pole Light with built in batteries lithium kunye ne-recharging system inikezela ngokusemgangathweni isimo, ukugcinwa kokugcina...
Ukukhanya kweLanga lokuPhanya kweLanga 30w isisombululo esilungileyo kwiimfuno zokukhanyisa izikhuselo ezikude. IziLimi zokuThengiswa kweMihlaba kunye nokwakhiwa kwamabhethri e-lithium kunye nokubuyiswa kwenkqubo kunika isimo esomeleleyo, ukugcinwa...
I- Polar Light Pole ephezulu ye-30W sisisombululo esihle kwiimfuno zokukhanyisa ukukhuseleka. Uluhlu lwexabiso loPhulo lweSityambo seSolar Street kunye nokwakhiwa kwamabhethri e-lithium kunye nokubuyiswa kwenkqubo kunika isimo esomeleleyo, ukugcinwa...
I- 30W Solar Street Street Pole sisisombululo esihle kwiimfuno zokukhanyisa ukukhuseleka. UkuLungiswa koKhanya kweSolar Pole 30W kunye nokwakhiwa kwamabhethri e-lithium kunye nokubuyiswa kwenkqubo kunika isimo esomeleleyo, ukugcinwa kokuqhubekayo...
Intaba ye- Solar Light Pole ye-30W isisombululo esihle kwiimfuno zokukhanyisa izikhuselo ezikude. Ukukhanya kweSolar 30 Power Led Pole Light kunye nokwakhiwa kwamabhethri e-lithium kunye nokubuyiswa kwenkqubo kunika isimo esomeleleyo, ukugcinwa...
I- 40w Street Solar Street sisisombululo esihle kwiimfuno zokukhanyisa ukukhuseleka. I-Amazon ye-Street Light ye-Solar inikezwa nge-LEDW isibane seL LED esenza lula ukukhanya kwindawo ye-30` x 30`. I- 40w Solar Street Light Pole ine-unit panel...
I- 30w Solar Street Light Led sisisombululo esihle kwiimfuno zokukhanyisa ukukhuseleka. Leli xabiso leLanga lokuKhanya kweSitrato linikezwa ngebani-30 watt (850 Lumen) isibane seL LED esilula ngokukhawuleza indawo ye-30` x 30` kunye neyunithi...
Ixabiso lento: USD 131.5 - 134.5 / Piece/Pieces
Imizila yethu ye- Solar Path kulula ukuyifaka, ukusetyenzwa okungaxhomekiyo-ntlawulo ngaphandle kwemfuneko yocingo okanye umsele. Izilwanyana zangaphandle ze-Solar Street zinezikhumba ezingenakuqhaqhaqha, i-aluminium engenawo amanzi. I s uper...
I-30 Watt Street Light Solar Panel iphambili kokubili izicelo zokuhlala / zasekhaya kunye nezoshishino ezineziphumo ezifikelela kwi-2500 Lumens! IziLampu zeSitrato eziPhezulu zeNdlela impawu zensimbi kunye ne-ABS kunye ne-Smart Sense Technology. Lo...
Ixabiso lento: USD 50 / Piece/Pieces
Le Ngaphandle yeNtaba yeeNtaba ze-Solar 30w yi-2500lm kwaye yonke i-wiring idibanisene nombane ophezulu kwiNtaba ye-Light Outdoor Lighting Mount ngqo kwiinkqubo zolawulo ngaphandle kokufuna izixhobo. Izixhobo ezakhiweyo zendlela yokukhusela...
Ixabiso lento: 50USD
I-All-In-One icebo lokukhanyisa i-Solar for Lot Lot kuphelisa imfuno yocingo lwangaphandle kwiipakethe ezikude kwaye azidingi ukuba umbane ugqibe. Le Parking 30w Solar uLote Light i- erferensi yokusetyenziswa kwiZikolo, iiNkundla zeeNkonzo, iiNkonzo...
I-Bbier Solar Energy Light Pole sisisombululo esihle kwiimfuno zokukhanyisa ukukhuseleka. I-Solar Led Street Light Nge Pole linikezwa ngebani-30 watt (850 Lumen) isibane seL LED esilula ngokukhawuleza indawo ye-30` x 30` kunye neyunithi yepaneli...
I-30W yethu ye- Solar Led Street Street Pole yongezelela kakhulu ukuvelisa nayiphi na indawo ekubekwa kuyo, njengeParkways, iiLotto zokuPaka, iiNdlela, amaziko okuthenga kunye nokunye! Le Pole Light Light Pole ilala ngokuklanywa kwaye yenziwe...
KwiChina 30w Ukukhanya kweSitet Street Abaxhasi
30W Ukukhanya kweSolar Street Ukulawulwa kwilawuli kude, Ukutshintsha kweMini / yoBusuku ngokuzenzekelayo Kuquka i-pole ephakamileyoIzigqeba zonke izixhobo ngaphakathi kwindlu enye yezindlu. All In One Solar Street Ukukhanya yinkqubo solar stand-alone eyenziwa esibondeni, ibhanki ibhetri, imodyuli photovoltaic kunye luminaires LED okanye CFL. Ibhethri enamandla enamandla iqinisekisa ukuba yethu Iimpawu zokuLawulwa kwelanga Unokugijima kwiiyure ezingama-30 emva kweeyure ezingama-6 kuphela elangeni - oku kulungelelaniso lwendalo .
Konke Ekubeni KuKhanya kweSitrato esisodwa Iimpawu zokuLawulwa kwelanga 30W Ukukhanya kweSitet Street Solar Iposti yeSampula seLatrato yeSola